Wuu i fiiriyaa oo si dhaqso ah ayuu u fiiriyaa | Ragga Caqliga leh
Wuu i fiiriyaa oo si dhaqso ah ayuu u fiiriyaa
Alicia tomero | 11/09/2021 10:08 | Lamaanaha iyo Galmada
Muuqaalku waa nooca isku xirnaanta taas oo dad badani u muujiyaan xiisaha iyagoo eegaya indhaha qof kale. Haddii dhab ahaantii ay jirto soo jiidasho, waxaa lagu muujiyaa habdhaqankan, ama qof la jinsi ah ama jinsi kale ah. Su'aashu waxay tahay markaad u fiirsato qof ku danaynaya, wuu ku eegayaa iyo si qarsoodi ah si dhakhso ah ayuu u fiiriyaa.
Qarsoodiga noocan ahi wuu is -soo -bixiyaa markaad u fiirsato qof indhaha kaa qaadi maayo. Markaas markaad u soo noqonayso muuqaalkaas waa marka uu dareemo inaad isaga ugaarsatay waana marka uu si dhaqso ah u fiiriyo. Dhab ahaantii ma waxay ka dhigan tahay wax fiican?
1 Maxaa loola jeedaa markaad i eegto oo aad si dhaqso ah u fiiriso?
2 Waa maxay calaamooyin kale oo badan marka uu ku eego?
Maxaa loola jeedaa markaad i eegto oo aad si dhaqso ah u fiiriso?
Shaki la'aan waa wax aad muhiim u ah oo xiiso weyn leh. Waa caddayn muujinaysa in a qofkaasi wuu ku danaynayaa, laakiin mararka qaarkood waxay muujin kartaa saamayn kale oo liddi ku ah. Marka hore waxaa jira wax adiga kugu saabsan oo muujinaya xiisaha qofka kale.
Waxa ugu xiisaha badan ee ku saabsan waayo -aragnimadan maahan in uu madaxiisa leexdo marka aad ka war hayso joogitaankiisa, ee waa in uu iska fiiriyo oo 15 ama 20 ilbidhiqsi ka dib mar kale ayuu ku eegayaa. Shaki la'aan waa nooc ka mid ah isgaarsiinta aan afka ahayn iyo shaki la'aan qofkaas adiga oo miyir qaba ama miyir qaba ayaad samaynaysaa. Si kastaba ha noqotee, raac xiisahaas weyn oo waa inaad ogaataa waxa ka dambeeya.
Haddii aad u malaynayso in haweenaydan ay isku dayeyso inay ku soo jiidato calaamadahaan, waxaa hubaal ah inay mar horeba sidaas samaynayso. Wuxuu ku samayn doonaa iyada oo loo eegayo kuwaa yar 'eegga' isla markaasna laga yaabee inuu wax kuu dareemo. Haddii aad iska fiiriso isla markiiba dib u bilaw isla dabeecaddii, waxaa hubaal ah inay kaa kicineyso.
Marka haweeneydu xishooto way ku eegi doontaa oo markaad aragto dhugashadiisa wuu leexinayaa, laakiin wuxuu isla markiiba madaxiisa u jeedinayaa dhankaaga. Kaliya haddii ay xoogaa dhiiran tahay ayay awoodi doontaa inay samayso tilmaam yar si aad u muujiso xiisahaaga.
Waxaa jira xaalado ay gabadhu iska eegi karto sababo kala duwan awgood. Waxaa laga yaabaa inaysan ahayn waxaad filaysay, laakiin waxaa laga yaabaa inaad walwalsan tahay ama aan raaxo lahayn. Marka ay jirto wada hadal dhow oo aad wajahayso qofkaas oo aad si joogto ah uga fogaato fiirintaada, sababahaasi waxay noqon karaan gunaanad. Laakiin xaalado badan dadkaasi waxay bixinayaan inay wax qarinayaan ama in aanay aad daacad ugu ahayn dareenkooda.
Waa maxay calaamooyin kale oo badan marka uu ku eego?
Waa arrin aad u xiiso badan marka gabadhaas adiga ku xiisaynaysa iyo sabab uun awgeed, isaguna wuu kaa daneeyaa. Si uun ama si kasta waxay ku tusaysaa rabitaankeeda markay ku eegayso. Haddii marka lagu daro muuqaaladaas uu ku dhoola cadeynayo, markaa ha sugin inaad ku celiso dhoolacadayn kale. In uu marba meel iska fiiriyo oo weliba ku dhoolla caddaynayo waxay la macno tahay inuu doonayo inuu noqdo mid bulsheed iyo muujiyo xiisaha aan kula kulmayo.
Haddii lagu daro adiga oo ku eegaya, wuu qoslaa oo taabtaa timihiisa waxaa iska cad inuu aad kuu jecel yahay. Waxay la macno tahay inuu ku majeerto, aad u xiiseeyo, lagana yaabo inuu ku dareemo. Iskuday inaad ogaato waxa tilmaamo dheeri ah ay filan karaan wax cad, maxaa yeelay haddii ay meel fog eegto waxay noqon karaan tilmaamo xishood.
Waxaa jira dad aan ku dhicin inay qaadaan tallaabada koowaad ama yaa waxay ka baqayaan inaan la aqbalin, taasina waa sababta dabcigooda, ay u dhaqmaan iyagoo ka fogaanaya muuqaalkaas. Si kastaba ha noqotee, haddii uu kula qaybsado dhoollacaddaynta, had iyo jeer wuu is -bixin doonaa. Sug si aad u ogaato haddii aad qaadi karto tallaabadaas yar oo aad la falgali karto, waa inaad la hadashaa iyo wadaagaan kiimikada isku xirnaantaas.
Calaamado badan oo cad oo ah inuu ku jecel yahay waa marka uu isku dayo inuu ku xanaajiyo indhihiisa, wuu ku eegayaa oo si isdaba joog ah ayuu u eegayaa, taasi waa sababta oo ah wuxuu doonayaa inuu kula hadlo. Sidoo kale haddii aad dhaqdhaqaaqyo kaftan iyo buunbuunin ah Waxaa loogu talagalay in lagu helo dareenkaaga, xitaa haddii uu faraxsanaado oo uu lulayo gacmihiisa si uu u muujiyo inuu baashaalo. Eeg haddii aad u qoslaa oo aad u qayliyaa Maaddaama ay yihiin calaamado doonaya inay soo jiitaan xiisahaaga, laga yaabee inuu kugu martiqaadayo inaad ka qaybqaadato wadahadalkiisa oo uu doonayo inuu u dhowaado shirkaddaada.
Muuqaalku waa taabashada xishoodka iyo dhibka leh, waa dariiqa aan is dhexgalno bulsho ahaan. Waa fal isgaarsiin iyo cadaawad dhanka dadka intiisa kale waxaan kula xiriiri karnaa indhaha dhexdooda qeyb yar oo ilbiriqsi iyo xitaa daqiiqado ah. Xaalado badan, fiirintu waa tan ugu horreysa ee u adeegta isku xirka.
Gebogebadii, haddii gabadhaasi ay ku soo eegto oo haddana fiiriso, waa sababta ayaa ku siinaya calaamado xiiso leh. Laakiin haddii shirarku joogto yihiin oo maalmaha soo socda uusan mar dambe ku fiirinayn, laga yaabee inaad si lama filaan ah u khalkhalisay calaamadaha. Marar badan oo ka mid ah dhacdooyinkaas gabadhaasi waxay diyaar u tahay inay kuu oggolaato inaad ogaato waxay samayso iyo haddii aad tahay qof dhiiran ama mudane weyn waad soo kici kartaa oo si is -barasho leh isu baraysaa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Lamaanaha iyo Galmada » Wuu i fiiriyaa oo si dhaqso ah ayuu u fiiriyaa